शरीरको देब्रे भागमा किन राखिन्छ महिलाको सर्टको टाँक ??
एजेन्सी । पुरुषको भन्दा फरक दिशामा अर्थात शरीरको देब्रे भागमा किन राखिन्छ महिलाका पोषाकको टाँक ? सामान्य तर धेरैले याद नगरेको विषय हो यो । एक अध्ययनले महिलालाई दुध खुवाउने समयमा बाया हातले समात्‍नुपर्ने हुनाले टाक खोल्‍न सजिलो हुोस् भन्ने हेतुले त्यसरी बनाइएको हो ।
तर यस्तो टाकको सिस्टम सन् १८५० देखि नै आइरहेको छ। तर अहिले यसको कुनै कारण नै नदेखे जस्तो मानिसले गर्छन्। एक सिद्धान्त अनुसार महिलाको यो कपडा पुरुषभन्दा फरक देखाउन यस्तो गरिएको हुन सक्‍ने भनाई पनि छ ।
जहाँ ज्यूँदो मानिसलाई रक्सीले टिल्ल पारेर खाल्डोमा पुरिन्छ …
क्यूवामा एउटा अचम्मको चलन छ । जहाँ ज्यूँदै मानिसलाई टन्न रक्सी पिलाएपछि उसलाई खाडल खनेर गाड्ने गरिन्छ । तपाईं अचम्ममा पर्नुभयो होला । तर यो सत्य हो ।
क्यूबामा बुजी अर्थात् रक्सी पर्वको नामले प्रचलित यो परम्परामा मानिसलाई काठको बाकसमा बन्द गरेर खाडलमा पुरिन्छ । टन्न रक्सी पिएको मानिसलाई बाकसमा हालि सडकमा घुमाइन्छ र उसको पछाडी हजारौँ मानिस भेला भई खाडलमा पुर्ने गर्छन् ।
वास्तवमा उनीहरुले काठको बाकसमा रहेको मानिसलाई मरेको ठान्छन् र एकजना सेतो कपाल भएकी वृद्धालाई त्यस व्यक्तिको विधवाको अभिनय गर्न लगाईन्छ ।
खाडलभित्र राखेको मानिसको मुख भने पुरिएको हुँदैन । बाकसबाट मुखमात्र देखाईएको हुन्छ । बाकसभित्र थुनिएको मानिसको मुखमा रक्सीको धारा नै लगाइन्छ ।
२०७८ श्रावण ३१, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 191 Views